रक्षा-बन्धन पर्वको सन्देश | BIVAS
← जनैपूर्णिमा (रक्षाबन्धन) पर्वको आध्यात्मिक रहस्य
यसपालीको गाइजात्रा →
रक्षा-बन्धन पर्वको सन्देश
– ब्रहृमाकुमारी शान्ति, भैरहवा
श्रावण महिनाको शुरुवातसंगैं हिन्दु धर्मावलम्बीहरु हर्ष र उल्लासका साथ राखी बन्धनमा बांधिने तयारीमा लाग्ने गर्दछन् । रङ्गी विरङ्गी राखीहरुले बजार सजिएको हुन्छ । ब्राहृमणहरु धागोको व्यवस्था गर्न तल्लीन हुन्छन् । आफ्नो क्षमता अनुसार सुन्दर राखीले आफ्ना दाज्यु भाइको हात सजाउने मनशाय बोकेका दिदी बैनीहरुको बजारमा चहल पहल हुन्छ । व्यवसायीहरु रक्षा बन्धनको मौकामा ग्राहकहरुलाई आकषिर्त गर्ने होडमा हुन्छन् । यसरी रक्षा-बन्धन पर्वले समाजलाई प्रभावित गरेको हुन्छ ।
प्रति वर्ष श्रावण शुक्ल पक्षको पुणिर्माको दिन मनाईने यो पर्व हिन्दुहरुका लागि मात्र नभै सम्पुर्ण मानव जातिकै लागि महत्वपुर्ण पर्व हो । जनै पुर्णीमाको दिन मुलरुपमा ब्राहृमणहरुद्वारा मन्त्र उच्चारण गर्दै यजमानहरुलाई पवित्रताको सुचक धागो बांधेर उनीहरुको जीवनमा विभिन्न प्रकारको अशुभता, दरिद्रता, भाग्य हिनता र असुरक्षालाई समाप्त गर्ने प्रयास गरिन्छ । तर वास्तवमा रक्षाबन्धनको एक दिनमा ब्राहृमणहरुको आशिष वचनद्वारा यजमानहरुको सारा जीवन नै सुखी शान्त र समृद्ध बनाउन सम्भव होला त ? यदि यो कुरा सार्थक हो भने आज कुनै पनि हिन्दु नर नारीहरु दुखी हुने नै थिएनन् । त्यस्तै यो दिन दिदीबैनीहरुले दाज्युभाइहरुलाई रक्षा बन्धन (राखी) बांध्ने चलन छ । यो राखी सूत्र दाजुभाइद्वारा दिदीबैनीहरुको हर जटिल अनि विपरीत परिस्थितीहरुमा रक्षा गर्ने एक प्रतिज्ञा कंगन हो भनेर मान्नुपनि प्रायः असंगत नै देखिन्छ । किनकी शारिरीक रुपमा दिदीबैनीको आत्मसम्मान तथा सम्पतीको रक्षा गर्न कुनै दाजुभाइलाई सदाकालको लागि सम्भव छैन । राखीको यही नै अर्थ हो भने एउटा सानो भाइले ठूला दिदीहरुको रक्षा कसरी गर्न सक्छ र ? पौराणीक कथा अनुसार दैत्य र देवताहरुको युद्धमा ईन्द्र देव जव आसुरी शक्तीबाट परास्त भई आफ्नो दैवी राज्य गुमाएर बसेका थिए तव उनकी पत्नी ईन्द्रायणीले ईश्वरलाई साक्षी राखी पवित्रता र आध्यात्मिक शक्तिको प्रतिक राखी सूत्र बांधेकी थिईन । फलस्वरुप ईन्द्रले आसुरी शक्तिलाई दमन गरेर आफ्नो राज्य भाग्य र सम्पती प्राप्त गर्न सफल भएका थिए । ईन्द्रयाणीले आफ्ना पती ईन्द्रलाई राखी बांधेको उल्लेखबाट यही सिद्ध हुन्छ की रक्षा बन्धन पर्व न केवल भाइबैनी, ब्राहृमण यजमानसंग नै सम्बन्धित छ । परन्तु यो महान् परम पवित्र पर्व पति र पत्नीलाई पवित्रतारुपी श्रेष्ठ गुण सूत्रमा बांधेर गृहस्थ जीवनमा सफलता र ऐश्वर्य दिलाउन समर्थ छ ।
रक्षा शब्दको शाब्दिक अर्थलाई हेर्दा रक्षा भनेको संरक्षण वा सम्भाल गर्नु, कुनै कुरा जोगाएर राख्नु हो भने बन्धन शब्दको अर्थ कुनै सम्झौता वा प्रतिज्ञामा सामेल हुनु हो । पवित्रतालाई जोगाएर राख्न वा रक्षा गर्न कुनै विशेष प्रकारको प्रतिज्ञा गर्नु वा संकल्पवद्ध हुनु रक्षा बन्धनको सन्देश हो । हामीले आफ्नो कर्मलाई पवित्र, श्रेष्ठ तथा दिव्य बनाएर स्व तथा विश्वको रक्षा गर्ने पवित्रताको बन्धन हो यो रक्षा-बन्धन ।
हुन त संसारमा अनेक बन्धन हुन्छन । किन्तु मुलरुपमा दुई बन्धन देखिन्छन् । एउटा ईश्वरीय बन्धन अर्को सांसारीक कर्मको बन्धन । ईश्वरीय बन्धन अर्थात दिव्य नियम मर्यादाको बन्धन । सत्य धर्ममा रहनु । जसमा सुख शान्ति, आनन्द र पवित्रता निहित छन् । सांसारीक कर्मको बन्धन भित्र दुःख अशान्ति, रागद्वेष, ईष्या, कलह क्लेष जस्ता अनेक विकृतीहरु निहित छन् । मुलरुपमा मानव शान्ति प्रिय हुनुको कारणले स्वभाविक रुपमा शान्तिको चाहना गर्दछ । बन्धनमा उ बांधिन चाहदैन । वास्तवमा मानिस स्वतन्त्र जन्मन्छ र सदा स्वतन्त्रता नै चाहन्छ । तर यो संसारमा उसले आाफुलाई सदा बन्धनमा रहेको महसुस गरीरहेको हुन्छ । संसारमा विद्यमान अन्य बन्धनलाई अस्वीकार गर्ने मानवले किन यो रक्षा बन्धनलाई हर्षका साथ स्वीकार गरीरहेको छ त ? मानव ईश्वरीय बन्धनलाई अंगिकार गर्न र सांसारीक बन्धनलाई परित्याग गर्न श्रेष्ठ मान्दछन् । रक्षा बन्धन एउटा ईश्वरीय बन्धन हो । पवित्रताको बन्धन हो , धर्मको रक्षाको बन्धन हो । सुखद बन्धन हो । तसर्थ केवल शारिरीक एवं आर्थिक रक्षामात्र मान्नु यस पर्वको महत्वलाई कम गर्नु हो । वास्तवमा मानवले शारिरीक रक्षा, धर्मको रक्षा, सतित्व अर्थात पवित्रताको रक्षा, कालबाट रक्षा, सांसारीक आपत तथा संकटबाट रक्षा जस्ता अन्य रक्षापनि चाहन्छ । विचार गरौं उल्लेखित रक्षा कुनै भाइ वा ब्राहृमणद्वारा मात्र हुन सक्दछ ? यदि हुने भए दिनदिनै संसारमा बढ्दो असुरक्षा किन त ? रक्षा त उसैले गर्न सक्दछ जो स्वयं सुरक्षित तथा स्व-रक्षित छ । वास्तवमा कुनै एक व्यक्तिले अर्का व्यक्तिको सदाकाल रक्षा गर्न सक्दैन । चारैतिर बढदो असुरक्षा, हत्या हिंसा, अन्याय अत्याचार पापाचार, आसुरी विचारधाराको बोलवाला भई मानव काम, क्रोध, लोभ, मोह अहंकार जस्ता विकृतिहरुको पुर्णतया वशमा परेर दुःख अशान्तिमा जीवन व्यतीत गरीरहेको समयमा मानवलाई यस प्रकारको दुखदायी बन्धनबाट मुक्ति दिलाउने, रक्षागर्ने पावन कर्तव्य निर्वाह गर्न तथा संकटको समयमा धर्मको रक्षा गर्नका निम्ति विश्व रक्षक, जगत नियन्ता, सर्व रक्षक परमात्मालाई यस धर्तीमा अवतरीत हुनुको आवश्यकता पर्दछ । वास्तवमा रक्षा बन्धन पर्व यही रक्षासंग सम्बन्धित छ । यद्यपी वर्तमान विश्वमा विद्यमान परिस्थितीसंग हामी अनभिज्ञ छैनौ । चारैतिर हत्या हिंसा आतंकको बजार गर्मा गरम छ । चेलीवेटीहरुको अस्मीता र गौरव संकटमा परेको छ । विनाशको कालो बादल मडारी रहेको छ । यस प्रकारको विकट परिस्थितीमा हरेक मानवको मनोवल ह्रास हुदै गएको छ । जहां पुनः सुख शान्ति स्थापित गरी मानव आत्माको रक्षा, भाग्यको रक्षा अनि राष्ट्रको अस्मिता रक्षा गर्न कोहीपनि समर्थ छैनन् ।
तसर्थ हामी हरेक नर नारीले आफ्नो जीवन श्रेष्ठ शक्तिशाली र सुरक्षित बनाउनका निम्ति मन, वचन र कर्मले पवित्रतालाई अपनाऔं । नकारात्मक वृत्ति तथा कुकृतिहरुका विरुद्ध पाईला चालौं । हामी सबैका कल्याणकारी परमपिता परमात्माद्वारा प्रदत्त रक्षासूत्र ग्रहण गरौं र स्व को रक्षा गरौं । सुरक्षित बनौ अनि देश तथा विश्वको रक्षा गरौं । वास्तवमा पवित्रताको धारण नै सुरक्षाको साधन हो । पवित्रताको व्रतले नै आजका सबै खाले समस्याहरुको हल गर्न सकिन्छ । पवित्रता नै सुखशान्ति एवं जीवन रक्षाको एक मात्र उपाय हो । प्रति वर्षको रक्षा बन्धन पर्वले हामीलाई यही सन्देश दिई रहेको छ । तर हाम्रो ध्यान धारणा गर्न तर्फ जान सकेन । आज मात्र परम्परा र प्रथाको रुपमा धागो बांध्ने गरिन्छ । जनै पुर्णीमाको दिन रक्षासूत्र बांध्ने मात्र नभै टिका लगाउने र प्रसाद खाई मुख मिठो बनाउने र दान दक्षिणा दिने चलनपनि छ । यसको आध्यात्मिक रहस्यबाट पनि हामी टाढै छौं । टिका लगाउनु भनेको आत्मिक स्वरुपमा टिक्नु (स्थिर रहनु) हो । मधुर तथा दिव्य वाणी बोल्नु श्रेष्ठ आचरणमा रहनु नै मिठो प्रसाद ग्रहण गर्नु र गराउनु हो । अनि दक्षिणाको रहस्य आफु भित्र विद्यमान नराम्रा आचरणहरु, आसुरी वृत्तिहरु त्याग गर्नु हो । यसरी वास्तवमा यो रक्षा बन्धन पर्वले हामीलाई मानवबाट देव समान बन्न आव्हान गरिरहेको छ । यसरी आफ्नो दृष्टि वृत्ति, कृति शुद्ध तथा पवित्र बनाउने को प्रतिक हो यो रक्षा बन्धन । जबसम्म हामीले परमात्माको नाममा आफ्ना पशु वृत्तीहरुको वली दिदैनौं, एक अर्का प्रति पवित्र दृष्टि राख्दैनौं, आाफु भित्रको विषलाई खतम गर्दैनौं तबसम्म हाम्रो रक्षा हुन सक्दैन ।
जसरी बिजुलीको तार सामान्य कुरा हो तर त्यसबाट करेन्ट बहन्छ तब त्यसमा शक्ति संचार हुन्छ अनि बल्वमा प्रकाश आउंछ अर्थात शक्ति नै बल्वमा प्रकाशको रुपमा हुन्छ । त्यस्तै रक्षा बन्धनको धागोपनि सामान्य दुई चार रुपैयाको नै हो तर यस भित्र जुन उच्च महत्वपुर्ण भाव लुकेको छ यसले नै जीवनलाई महान् र उच्च बनाउदछ । यदि यो धागो भित्रको पवित्र, उच्च भावलाई बुझेर जीवनमा अपनाउंदछौं भने अवश्य सुखी र शान्त बन्न सक्नेछौं । जब हामी यो आध्यात्मिक महत्वलाई ध्यान दिंदै हामी पवित्र तथा शुद्ध कर्म गर्दछौं तव नै रक्षाबन्धन पर्व मनाएको सार्थक हुनेछ । अन्यथा रक्षा बन्धन केवल दुई चार रुपैयांको धागोमा मात्र सीमित रहने छ ।
अतः पवित्रताको प्रतिक रक्षा बन्धनको अर्थ तथा महत्व बुझेर मात्र रक्षाबन्धन ग्रहण गरौं । यस संसारबाट आसुरी वृत्तिलाई नाश गरी दैवी शक्तिको स्थापनार्थ राखीको रुपमा हातमा बांधिने यो मुलायम धागोमा समाहित असिम शक्ति प्राप्त गर्न समर्थ बनौं । मानवतासंग हाम्रो सम्बन्धलाई घनिष्ठ बनाउन सक्षम यस राखी अर्थात रक्षासूत्रलाई स्व परिवर्तनको दृढ संकल्पका साथ हातमा बांधी सद्भावना, स्नेह, सहयोगरुपी सौगात दिऔं । मधुर वचनरुपी प्रसाद बांड्दै आत्मिक स्थितीको तिलकले मस्तकलाई सुशोभित बनाऔं ।
ओम् शान्ति !
– सञ्चालिका – ब्रहृमाकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय एवं राजयोग प्रशिक्षण केन्द्र, भैरहवा ।
2 responses to “रक्षा-बन्धन पर्वको सन्देश”
अगस्ट 5, 2009 at 4:08 बेलुका
I’ve no feeling of writingacomment on “janai ” related article because “Janai ” is the one link of the CHAIN which is being used to BRHMANIZE the average nepalese nationals.
अगस्ट 2, 2012 at 10:14 बिहान
Thanks for inform…